Ọzụzụ enyemaka mbụ ahụike uche - Bromley, Lewisham & Greenwich Mind
Ị nọ ebe a: Mbido > Ọzụzụ gbasara ọgụgụ isi > Ọzụzụ Mental Health First Aid
Ọzụzụ enyemaka mbụ nke ahụike uche (MHFA) bụ nkuzi mba ụwa ama ama, nke emebere iji kuziere ndị mmadụ ka ha ga-ahụta akara na akara ahụike ahụike uche wee nye enyemaka na ntọala enyemaka mbụ.
Ịtinye ọzụzụ enyemaka mbụ ahụike uche n'ime nzukọ gị ga-agba ndị otu gị ume ikwu okwu n'efu maka ahụike uche, na-ebelata ihere na ịmepụta omenala dị mma. Ọzụzụ MHFA nwekwara ike inyere azụmahịa gị aka ịchekwa ego site na mbelata anọghị ya na ọnụ ahịa ntugharị ndị ọrụ.
Kedu ihe bụ ọzụzụ enyemaka mbụ ahụike uche?
Ọzụzụ enyemaka mbụ nke ahụike uche bụ ọzụzụ mba ụwa ama ama nke e mere iji kuziere ndị mmadụ ka ha ga-ahụ akara na akara ahụike ahụike uche wee nye enyemaka na enyemaka enyemaka mbụ.
Inwe ndị ọrụ ibe gị nwere ike ịmata akara ngosi nke nsogbu ahụike ọgụgụ isi na ndị nwere nka iji rụọ ọrụ n'enweghị nsogbu dị ka isi mmalite nke kọntaktị bara ezigbo uru, ma gosi ndị ọrụ na ị ji ahụike ọgụgụ isi ha kpọrọ ihe dịka ị na-eme ahụike ha.
Ihe omume anyi n’enye:
Ntọala nke nghọta nke nsogbu na ọnọdụ ahụike;
Ngwaọrụ na ederede maka ịbịaru nso na isoro ndị ọrụ ibe gị nwee ike ịme nsogbu;
Akwụkwọ dị elu na akụrụngwa nkwado;
MHFA England asambodo.
Mgbe ha gụsịrị akwụkwọ ahụ nke ọma, ndị sonyere ga-enweta:
Nkà bara uru iji chọpụta ihe na-akpata na ihe ịrịba ama nke nsogbu ahụike ọgụgụ isi;
Obi ike ịbanye, mesighachi obi na ịkwado onye nọ na nsogbu;
Mmezi mmekọrịta mmadụ na ibe ya dịka ige ntị na-enweghị ikpe;
Ihe omuma iji nyere onye ozo aka inweta aru ike ha site na idu ha ka ha kwadoo.
A na-enye ọzụzụ enyemaka izizi ahụike uche anyị dị ka nkuzi mmadụ ụbọchị abụọ na ebe nchekwa Covid dị na Bromley (anyị nwekwara ike ịbịa n'ime ụlọ gị) ma ọ bụ nkuzi ịntanetị nke ọkara ụbọchị anọ.
Ọmụmụ na-ewere ọnọdụ site na ngwakọta nke ngosi, mkparita ụka otu na mmemme ogbako. Ewubere nnọkọ ọ bụla gburugburu atụmatụ mmemme enyemaka mbụ nke ahụike uche. Anyị na-amachi ọnụ ọgụgụ ndị mmadụ 16 n'otu nkuzi ka onye na-enye ọzụzụ wee chekwaa gị yana ịkwado gị.
Onye ọ bụla mezuru usoro MHFA na-enweta:
Akwụkwọ asambodo nke ịbịa kwuo na ị bụ Onye Nlekọta Ahụike Mbụ nke Ahụ Ike.
Akwụkwọ ntuziaka iji zoo aka mgbe ọ bụla ịchọrọ ya.
Kaadị nkọwapụta ngwa ngwa maka usoro enyemaka mbụ nke Mental Health.
Akwụkwọ ọrụ, gụnyere ngwa ọrụ na-enyere aka iji kwado ahụike uche gị.
Ọnụ onye ọ bụla, 1 – 7 ebe: £225*
Ọnụ onye ọ bụla, 8-12 ebe: £ 200 *
Ọnụ onye ọ bụla, 13-16 ebe: £ 175 *
* RRP £ 300 kwa onye. Gụnyere akwụkwọ ntuziaka MHFA, akwụkwọ ọrụ, asambodo na kaadị ime ihe.
Nkuzi ume ọhụrụ MFHA - naanị £100 (RRP £125)
A na-atụ aro ka ndị enyemaka mbụ ahụike uche ga-enweta ọzụzụ ume ọhụrụ afọ atọ ka asambodo ikpeazụ ha gachara.
Usoro nkuzi ume ọhụrụ nke dị awa anọ na-akwado ndị enyemaka mbụ ahụike uche site na:
Na-eme ka nkà ha dị ọhụrụ.
Na-emelite ihe ọmụma ha maka nkwado ahụike uche.
Inye ha ohere ime atụmatụ mmemme enyemaka mbụ ahụike uche ha.
Nkuzi ume ọhụrụ dị na mmadụ ma ọ bụ n'ịntanetị, ọ na-efu naanị £100 maka onye ọ bụla (RRP £125).
Ọ bụrụ na oge eruola ime ka nkà gị nwee ume, deba akwụkwọ na nkuzi ume ọhụrụ MHFA England ugbu a, ma nwee obi ike na ị na-arụ ọrụ gị dị mkpa n'enweghị nsogbu.
“Ikekwe otu n’ime ọmụmụ ihe kasị mma m nọworo na-aga. Ọ na-adị m ka ọ gbanwewo, echekwara m na m ga-amalite ozugbo itinye ihe m mụtara n'ọrụ. ”
Nwere mmasị? Kpọtụrụ ugbu a!
Nzukọ Gị (chọrọ)
Nọmba ekwentị gị (achọrọ)
Mba nke ndị bịara (achọrọ)
Biko kekọrịta ozi ọ bụla ọzọ ị chere ga-aba uru
“Ọ bara uru, dị irè ọdịnaya nke lebara anya na isiokwu ndị ahụ n'ụzọ doro anya."
Chọpụta ihe ndị ọzọ sonyere na-ekwu gbasara ọzụzụ ahụike uche anyị.
Banyere Team Training Training nke Uche
Nzaghachi nkuzi Ọzụzụ ọgụgụ isi